iskahorimaadka sokeeye ee Lubnaan ayaa soo ifbaxaya marka burburka dhaqaale uu u banneeyo rabshado - Wardeeq 24 TV iskahorimaadka sokeeye ee Lubnaan ayaa soo ifbaxaya marka burburka dhaqaale uu u banneeyo rabshado Wardeeq 24 TV
Home Warar-ka iskahorimaadka sokeeye ee Lubnaan ayaa soo ifbaxaya marka burburka dhaqaale uu u...
iskahorimaadka sokeeye ee Lubnaan ayaa soo ifbaxaya marka burburka dhaqaale uu u banneeyo rabshado
Dagaal gacan ka hadal ah ayaa ka dhaca dukaamada waaweyn maalin kasta. Khadadka dhaadheer ayaa mas ka saaraya xarumaha shidaalka ee wali furan. Farmashiyaashu waxay ku hanjabeen inay xiri doonaan. Dagaalada qoryaha loo adeegsado ayaa si aan la fahmi karin uga qarxeen qaybo kala duwan oo ka tirsan caasimada. Dibadbaxayaasha careysan ayaa xiray waddooyinka ku teedsan waddanka, iyagoo adkeeyay culeys dhaqaale oo awalba yaraa.
Muuqaalada dareenka ayaa ku hanjabaya inay u rogi doonaan wax xun.
Sii kordheysa, saraakiisha iyo siyaasiyiinta Lubnaan waxay sare uqaadayaan muuqaalka khilaafaadka gudaha. Tani waxay imaaneysaa 31 sano un kadib markii uu dhamaaday dagaaladii foosha xumaa ee wadanka ka socday 15 sano. Cutubkaas madow waxaa lagu soo gunaanaday aaladda loo yaqaan ‘modus vivendi’ oo dadka naqdiya ay leeyihiin musuqmaasuq dowladeed oo nidaamsan, oo ku dhammaaday burburka dhaqaale ee keenay Lubnaan, markale, qarka u saaran.
Previous articleDiblomaasiyiin ayaa loo diiday inay booqdaan iyadoo Michael Kovrig Canadian ah maxkamad lagu saarayo Shiinaha
Next articleCarruurtan reer Nigeria waxay abuurayaan filimo gaagaaban oo saynis ah oo adeegsanaya taleefannadooda, Hollywood-na fiiro gaar ah ayey u leedahay